Wed, Sep 26, 2018 | 14:11:09 NST
सोमालियाको राजधानीम दुइवटा आत्मघाती विस्फोट
असोज ५ – सोमालियाको राजधानी मोगादिसुमा भएको दुईवटा आत्मघाती बम बिस्फोटमा पत्रकार र प्रहरी सहित कम्तीमा १४ जनाको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउनेमा सरकारी टेलिभिजनका पूर्व सम्पादक लीबन अली नूर सहित २ जना पत्रकार र अरु २ जना प्रहरी रहेका छन् ।
सरकारको विरोधमा भारतमा राष्ट्रब्यापी बन्द
असोज ४ – यूपीए सरकारले गरेको पछिल्ला निणर्यको विरोधमा बिहीबार भारतमा राष्ट्रव्यापी बन्द आह्वान गरिएको छ । डिजेलमा भएको मूल्यवृद्धि र खुद्रा व्यापारमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निणर्यको विरोधमा विपक्षीले आह्वान गरेको बन्द आह्वानलाई सरकारलाई समर्थन गरेका पार्टीहरुले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
महिनावारी बन्द भएका महिलामा स्तन क्यान्सरको खतरा बढी
असोज ३ - महिनावारी बन्द भएका र मधुमेह भएका महिलामा स्तन क्यान्सरको खतरा बढी हुने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । बेलायतमा सार्वजनिक भएको पछिल्लो अध्ययन अनुसार महिनावारी बन्द भएका र मधुमेह भएका महिलामा स्तन क्यान्सर २७ गुणा बढी हुने देखाएको छ ।
मेक्सिकोको ग्यास प्लान्टमा विस्फोट हुँदा २६ को मृत्यु
असोज ३ - मेक्सिकोको एक ग्यास प्लान्टमा बिस्फोट हुँदा २६ जनाको ज्यान गएको छ । रेनोसा र मोन्टेरी शहरको सडकसंग जोडिएको उत्तरी मेक्सिकन राज्यमा रहेको ग्याँस प्लान्टमा आगलागीका कारण विष्फोट भएको हो ।
केटको अर्धनग्न तस्विर नछाप्न फ्रान्सेली अदालतको आदेश
असोज २ - फ्रान्सको अन्दालतले बेलायती युवराज्ञीको अर्ध नग्न तस्विर प्रकाशनमा रोक लगाएको छ । क्लोजर म्यागेजिनले अर्धनग्न तस्विर छापेकोमा कडा आपत्ति जनाउँदै युवराज्ञी केट र राजकुमार विलियमले कानूनी उपचारको बाटो रोजेपछि फ्रान्सको अदालतले भविष्यमा ती तस्विर प्रकाशन नगर्न आदेश दिएको हो ।
पूर्वी एसियामा सैन्य संघर्षको सम्भावना बढेको चेतावनी
असोज १ - विवादित टापूको विषयलाई लिएर भईरहेको आन्दोलनले पूर्वी एसियामा सैन्य संघर्षको सम्भावना बढेको अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्री लियोन पनेटाले आन्दोलनले मानिसहरुमा बढी घृणाको भावना बढ्दै जाने बताउनु भएको छ ।
आफ्ना कर्मचारीलाई सुडान र ट्युनिशिया छाड्न अमेरिकाको आदेश
भदौ ३१ – सुरक्षा खतरा बढेपछि अमेरिकाले आफ्ना कुटनीतिज्ञ, कर्मचारी र उनीहरुका परिवारलाई सुडान र ट्यूनिशिया छोड्न आदेश दिएको छ । यी दुई देशमा रहेका अत्यावश्यक कर्मचारी बाहेकका सबैलाई तत्काल फर्किन भनिएको अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
अमेरिकामाथिको आक्रमण असैह्य : ओबामा
भदौ ३० - अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले इस्लाम धर्म विरोधी फिल्मको बहानामा अमेरिकामाथिको आक्रमण सैह्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । फिल्मका कारण मुस्लिम देशहरुमा भैरहेको आक्रमणप्रति कडा प्रतिक्रिया जनाउँदै ओबामाले कुनै बहानामा भएपनि आक्रमण नसहने बताएको छ ।
भारतमा ढुवानी ब्यवसायीको चक्काजाम
भदौ ३० – खुद्रा बजारमा विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने भारत सरकारको निर्णयको बिरोध शुरु भएको छ । दिल्लीमा ढुवानी व्यवसायीले शनिवार चक्काजाम गरेका छन् । भारत सरकारले शुक्रवार मल्टी ब्रान्ड खुद्रा बजारमा ५१ प्रतिशत विदेशी लगानीलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।
विद्रोहीको आक्रमणमा दुई अमेरिकी सैनिकको ज्यान गयो
भदौ ३० – अफगानिस्तानमा विद्रोहीको आक्रमणमा परी दुई जना अमेरिकी सैनिकको ज्यान गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सेनाको मुख्य आधार मानिने दक्षिणी अफगानिस्तानको सैन्य शिविरमा विद्रोहीहरुले साना रकेट र मोर्टार आक्रमण गरेको अमेरिकी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
‘इस्लाम विरोधी’ चलचित्रको विरोधमा सात जनाको ज्यान गयो
भदौ ३० – इस्लाम विरोधी भनिएको चलचित्रको विरोधमा मध्यपूर्व र अफ्रिकामा भएको प्रदर्शनमा शुक्रवार सात जनाको ज्यान गएको छ । सुडानको खार्तुममा रहेको अमेरिकी दुतावासमा आक्रमण हुँदा ३ जनाको ज्यान गएको हो । यस्तै ट्युनिशियामा दुई, इजिप्ट र लेबनानमा एक÷एक जनाको ज्यान गएको बिबिसीले जनाएको छ ।
फ्रान्सको पत्रिकामा बेलायती युवराज्ञी केटको अर्धनग्न तस्विर प्रकाशित
भदौ २९ – राजकुमार ह्यारीको नाङ्गो तस्विर छापिएको विवाद सेलाउन नपाउँदै बेलायती युवराज्ञी केटको पनि अर्धनग्न तस्वीर छापिएको छ । फ्रान्सको क्लोजर पत्रिकाले युवराज्ञी केटको तस्वीर छापेपछि बेलायती राजपरिवार फेरि विवादमा परेको हो ।
भारतीय सेनाले भन्यो : महिलालाई लडाइँमा पठाउन सकिदैन
भदौ २९ – भारतीय स्थल सेनाले महिलालाई लडार्इंको मैदानमा पठाउन नसकिने र त्यस्तो कुनै प्रकारको जिम्मेवारी दिन नसकिने बताएको छ । कानून र शिक्षा विभागको साथै सेनाको अरु विभागमा स्थायी रुपमा जिम्मेवारी दिनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिंदै सेनाले यस्तो बताएको हो ।
मध्यपूर्वमा शान्ति कायम राख्न राष्ट्रसंघका महासचिवको आग्रह
भदौ २९ – संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान की मूनले इस्लाम विरोधी चलचित्रका नाममा भएको प्रदर्शनको निन्दा गर्दै शान्ति कायम राख्न आव्हान गर्नुभएको छ । लिबिया, इजिप्ट हुँदै मध्यपूर्वमा फैलिएको हिंसा अस्वीकार्य भएको भन्दै बानले छलफल, आपसी विश्वास र समझदारीका माध्यमबाट निकास निकाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
राष्ट्रसंघीय विशेष दूत सिरिया पुगे
भदौ २९ – राष्ट्रसंघ र अरब लिगका संयुक्त विशेष दूत लख्दर ब्राहिमी सिरिया पुग्नुभएको छ । विशेष दूत नियुक्त भएपछि उहाँको यो पहिलो सिरिया भ्रमण हो । भ्रमणको शुरुमै सिरियाली विदेशमन्त्रीलाई भेटेका ब्राहिमीले सिरियाको गहिरिंदो संकटलाई कसैले पनि बेवास्ता गर्न नसक्ने बताउनुभयो ।
पैगम्वर मोहम्मदको अपमान गरिएको भन्दै अमेरिकाको विरोध जारी
भदौ २८ - अमेरिकी चलचित्रमा ईस्लाम धर्म र पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरिएको भन्दै शुरु भएको विरोधले चर्को रुप लिएको छ । लिवियामा अमेरिकी राजदूत मारिएको एक दिनपछि आज यमनको राजधानी सानामा रहेको अमेरिकी दुतावासमा आक्रमण भएको छ । अमेरिकी दुतावासमा प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गर्नुका साथै दूतावास परिसर भित्र पसेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माधयमले जनाएका छन् ।
कान्दाहार विमान अपहरण काण्डका आरोपी १३ वर्षपछि पक्राउ
भदौ २८ – कान्दाहार विमान अपहरण काण्डका एक जना आरोपीलाई भारतीय प्रहरीले झण्डै १३ वर्ष पछि पक्राउ गरेको छ । अपहरणमा संलग्न जावेद अहमद भनिने मेहराजुद्धिनलाई भारतको जम्मु कश्मिर प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
लिबियामा अमेरिकी राजदूतको हत्या
भदौ २७ – लिबियामा अमेरिकी राजदूतको हत्या भएको छ । अमेरिकामा बनेको चलचित्रमा ईस्लाम धर्म र पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरिएको भन्दै लिबियाको बेनगाजी शहरमा रहेको अमेरिकी बाणिज्य दुतावासमा भएको आक्रमणमा अमेरिकी राजदूत क्रिस स्टेफेन्सको ज्यान गएको छ ।
कपडा कारखानामा आगो लाग्दा २ सय १२ जनाको मृत्यु
भदौ २७ – पाकिस्तानको कराँचीमा कपडा कारखानामा आगो लाग्दा २ सय १२ जनाको ज्यान गएको छ । कम्तीमा ६५ जना घाईते भएका छन् । तीन तले भवनमा आगो लाग्दा ठूलो मानवीय क्षति भएको जी ओ टीभीको अनलाइन संस्करणले जनाएको छ ।
सुरक्षाको लागि महिलालासंग खुर्सानीको धूलो !
भदौ २७ – राती हिडडुल गर्नुपर्ने महिलाको सुरक्षामा सरकार कमजोर देखिएको आरोप लागेका बेला भारतको महाराष्ट्र सरकारले त्यस्ता महिलाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरेको छ । राज्य सरकारले त्यस्ता महिलालाई खुर्सानीको धुलो छर्किने र करेन्ट प्रवाह हुने उपकरण दिनुपर्ने प्रस्ताव सहितको निर्देशिका मुम्बई उच्च अदालत समक्ष पेश गरेको छ ।
इस्लाम धर्मको अपमान भएको भन्दै अमेरिकी वाणिज्य दुतावासमा आक्रमण
भदौ २७ – अमेरिकामा निर्माण गरिएको चलचित्रमा इस्लाम धर्म र पैगम्बर मोहम्मदको अपमान गरिएको भन्दै रहेको अमेरिकी बाणिज्य दुतावासमा आक्रमण भएको छ । प्रदर्शनकारीको आक्रमणमा परी एक जना अमेरिकी अधिकारीको ज्यान गएको छ । अर्का एक घाईते भएका छन् ।
भारतीय र पाकिस्तानी नागरिक एक अर्काप्रति निकै नकारात्मकः अध्ययन
भदौ २६ – भारत र पाकिस्तानले कुटनीति मार्फत् सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरे पनि दुई देशका नागरिक एक अर्काप्रति निकै नकारात्मक रहेको पाइएको छ । अमेरिकी संस्था प्यू रिसर्च सेन्टरले गरेको अध्ययनमा भारत र पाकिस्तानका नागरिकको सोंच सरकारको भन्दा फरक रहेको पाइएको बिबिसीले जनाएको छ ।
ट्वीनटावर ध्वस्त भएको ठाउँमा संग्रहालय संबन्धि विवाद समाधान
भदौ २६ – अमेरिकामा सन् २००१ मा आतंकवादी आक्रमण भएको ठाउँमा संग्रहालय निर्माण सम्बन्धि बिवाद समाधान भएको छ । न्यूयोर्क र न्यूजर्सीका गभर्नरले संग्रहालय सम्बन्धि सम्झौताबारेको विवरण सार्वजनिक गर्दै यसको विवाद समाधान भएको बताएका हुन् ।
विवादास्पद जेल अफगानी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी
भदौ २५ – अमेरिकाले अफगानिस्तानको बग्राममा रहेको विवादास्पद जेलको नियन्त्रण अफगानी अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ । सन् २०१४ मा नेटो सेनाको फिर्ती अगाडि नै सबै जेलको नियन्त्रण स्थानीय प्रशासनलाई हस्तान्तरण गर्ने पूर्व सम्झौता अनुसार बग्राम जेलको अधिकार हस्तान्तरण गर्न लागिएको नेटो सेनाले जनाएको छ ।
गोली प्रहारबाट चारजनाको ज्यान गयो
भदौ २३- भारतको राजधानी दिल्लीको पश्चिमी क्षेत्र स्वरुपनगरमा भएको गोलीकाण्डमा ४ जनाको ज्यान गएको छ । चार जना घाईते छन् । दुईजना बन्दुकधारीले ६ जनालाई गोली हानेपछि आफैलाई पनि गोली हानेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
तालिवान विरुद्ध लड्न वेलायती राजकुमार ह्यारी अफगानिस्तानमा
भदौ २२ - वेलायती राजकुमार ह्यारी तालिवान विरुद्धको कारवाहीमा उत्रिनु भएको छ । उहाँले अफगानिस्तानमा रहेका वेलायती सैनिकसँगै बसेर तालिवान विरुद्धको कारवाहीमा भाग लिने विविसीले जनाएको छ । २७ वर्षिय राजकुमार ह्यारी वेलायती सेनाले प्रयोग गर्ने अपाचे हेलिकप्टरका चालक हुनुहुन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालन गएराती अफगानिस्तानको हेलमन्द प्रान्तमा रहेको वेलायती सेनाको शिविरमा पुगेका ह्यारी ४ महिनासम्म अफगानिस्तानमा बस्नु हुनेछ ।
चीनमा गएको भूईंचालोमा ५० को मृत्यु
भदौ २२ - दक्षिण पूर्वी चीनमा गएको श्रृखलावद्ध भूईंचालोबाट कम्तीमा पनि ५० जनाको ज्यान गएको छ । अरु १ सय ५० जना घाइते भएको चिनियाँ सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वाले जनाएको छ । गुईजुहु र युनान प्रान्तको सिमा क्षेत्र केन्द्र बिन्दु भएर ५ दशमलव ६ रेक्टर स्केलका २ वटा भूईंचालो गएको अमेरिकी भुगर्भ विभागले जनाएको छ ।
सेभ द चिल्ड्रेनका विदेशी कर्मचारीलाई पाकिस्तान छाड्न आदेश
भदौ १९ – पाकिस्तानले वाल वालिकको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था सेभ द चिल्ड्रेनका विदेशी कर्मचारीलाई देश छाड्न आदेश दिएको छ । पाकिस्तानले उनीहरुले पाकिस्तान छाड्नु पर्ने कारण उनीहरुलाई नै बताएको स्पष्ट पारेको छ ।
विस्फोट भएको पटाका कारखाना सञ्चालकलाई हत्याको मुद्दा चलाइने
भदौ २१ – भारतीय प्रहरीले ५४ जनाको ज्यान जाने गरी आगलागी भएको तमिलनाडुको पटाका कारखानाका सञ्चालकमाथि हत्या अभियोगमा मुद्दा चलाउने भएको छ । कारखानाको लाईसेन्स एक दिन अघि नै रद्द गरिएकोमा बुधवार पनि कारखाना सञ्चालन गरेकाले कारखानाका मालिक नै मुख्य अभियुक्त भएको भन्दै प्रहरीले उनी विरुद्ध हत्याको मुद्दा चलाईने बताएको हो ।
भारतको पटका कारखानामा विस्फोट, ५४ को ज्यान गयो
भदौ २० – भारतको तमिलनाडुस्थित एक पटाका कारखानामा भएको विष्फोटमा कम्तिमा ५४ जनाको ज्यान गएको छ । तमिलनाडुको सिवकासी नजिकै रहेको कारखानामा विष्फोटपछि भएको आगलागीमा ज्यान गुमाएकामध्ये ५४ जनाको शव निकालिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
भारतका प्रधानमन्त्री इतिहासकै असफल नेता बन्ने संभावना !
भदौ २० – पश्चिमा जगतका सञ्चारमाध्यमहरुले भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहलाई असफल प्रधानमन्त्रीका रुपमा विश्लेषण गर्ने क्रम बढेको छ । वासिङ्गटन पोष्ट दैनिकले प्रधानमन्त्री सिंहको क्षमतामाथि नै प्रश्नचिन्ह उठाउदै उहालाई इतिहासकै असफल नेताको रुपमा चिनिने खतरा बढिरहेको विश्लेषण गरेको छ ।
भारतका १८ लाख सरकारी कर्मचारी हड्तालमा
भदौ २० – आरक्षण सम्बन्धि विधेयकलाई लिएर भारतको उत्तरप्रदेशका १८ लाख सरकारी कर्मचारी हड्तालमा उत्रिएका छन् । नोकरीमा पदोन्नतीका लागि अनुसूचित जाति जनजातिलाई आरक्षण दिने गरी संविधानमा संशोधन गर्ने विधेयकलाई हिजो मन्त्रीपरिषदले स्वीकृति दिएपछि कर्मचारी विरोधमा उत्रिएका हुन् ।
जागिरे श्रीमानले श्रीमतिको नाममा बैङ्कमा पैसा जम्मा गर्नैपर्ने
भदौ १९ – भारत सरकारले नियमित तलब पाउने श्रीमानले आफ्ना श्रीमतीलाई पनि नियमित तलब दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । महिला सशक्तिकरणका लागि भन्दै केन्द्रीय महिला तथा बालविकास मन्त्रालयले घरेलु कामकाजी महिलालाई श्रीमानले हरेक महिना तलब दिनुपर्ने व्यवस्था सहितको प्रस्ताव तयार गरेको हो ।
चीनमा निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा गिरावट
भदौ १८ - चीनमा निर्माण क्षेत्रको उत्पादनमा गिरावट आएको छ । उत्पादन नौ महिना यताकै सबै भन्दा बढी खस्केको अधिकारीहरुले बताएका छन् । सरकारले अर्थव्यवस्थामा अनुमान गरे भन्दा बढी गिरावट आउने आशंका बढेको बताएको छ । सरकारी आँकडा अनुसार उत्पादन कार्यमा ४९ दशमलब २ प्रतिशतले गिरावट आएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
आक्रमणको डरले पलायन भएका भारतीय कार्यथलोमा फर्किन थाले
भदौ १७ - आक्रमणको डरका कारण दक्षिणी भारतबाट घर फर्किएका पूर्वोत्तर क्षेत्रका विद्यार्थी तथा कामदार कार्यथलोमा फर्किन थालेका छन् । उनीहरुलाई फर्काउन शनिवार गुवाहाटीदेखि बेंगलोर सम्म विशेष रेल सेवा सन्चालन गरिएको भारतीय सन्चारमाध्यमले जनाएका छन् । घरबाट फर्किएका मानिसको सुरक्षा लगायत व्यवस्था अनुगमनका लागि असम सरकारका दुई मन्त्री नै खटिएका थिए ।
वेलायती पुरुषले गाडी र तलब बारे बढाई चढाई गर्छन : अध्ययन
भदौ १७ - बेलायतका ५५ प्रतिशत पुरुषले आफ्नो तलब र गाडीबारे बढाई चढाई गरेर बोल्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । देशका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको सर्वेक्षणले हरेक पाँच जनामा एक जनाले पुराना साथीहरुलाई तलब र गाडीका बारेमा झुटो जानकारी दिने गरेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी २१ प्रतिशत बेलायती पुरुषले स्कुल या कलेजका पुराना साथी भेट भएको अवस्थामा झुटो बोल्ने गरेको स्वीकारेका छन् ।
घना बस्तीमा मोबाईल टावर नराख्न भारत सरकारको निर्देशन
भदौ १६ - भारत सरकारले घनाबस्तीमा मोबाईल टावर नराख्न मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ । सरकारको निर्देशन अनुसार मोबाईल टावर राख्ने कम्पनीहरुले त्यस्ता टावरको नजिकमा कुनै घर नभएको सुनिश्चित नगरेसम्म टावर राख्ने अनुमति पाउने छैनन् । यस्तै सरकारले मोबाईल कम्पनीहरुलाई धेरै विकिरण उत्पन्न गर्ने सेट निर्माण बन्द गर्न पनि निर्देशन दिएको छ ।
विहारीलाई महाराष्ट्रबाट लखेट्ने ठाकेरेको धम्की
भदौ १५ - असम हिंसापछि भारतका दक्षिणी राज्यमा जातीय हिंसाको त्रास फैलिरहेका बेला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका नेता राज ठाकेरेले सबै विहारीलाई महाराष्ट्रबाट लखेट्ने धम्की दिएका छन् । विहार पुलिसलाइ जानकारी जानकारी नै नदिइ मुम्बइ पुलिसका एक जना अधिकृतले एक जना विहारी युवकलाई लगेपछि उनी विरुद्ध कानुनी कारवाही सक्ने बताए लगत्तै ठाकरेले प्रहरी अधिकारी माथि कारवाही भए सबै विहारीलाइ लखेट्ने धम्की दिएका भारतीय संचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
लादेनको हत्याबारे किताब लेख्नेलाई कारबाही हुन सक्ने
भदौ १५ – अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले ओसामा बिन लादेन मारिएको घटनाबारे किताब लेख्ने अमेरिकी विशेष फोर्सका पूर्व सदस्यमाथि कारवाही हुन सक्ने बताएको छ । रक्षा विभागका एक उच्च वकिलले ती सैनिकले सैनिक गोप्यता सार्वजनिक नगर्ने सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारवाही हुनसक्ने बताएका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका २ सय ७० मजदुरलाई हत्याको आरोपमा मुद्दा चलाइने
भदौ १५ – दक्षिण अफ्रिकाको मरिकाना प्लाटिनम खानीमा भएको हिंसाका क्रममा पक्राउ परेका मजदुरमाथि सहकर्मी हत्याको आरोपमा मुद्दा चलाईने भएको छ । हिंसा भएका बेला घटनास्थलमा रहेको पाएकै भरमा २ सय ७० मजदुरलाई सामान्य उपयोगिता सिद्धान्तका आधारमा सार्वजनिक मुद्दा लगाउने निर्णय भएको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।